Dhaawac kale iyo Real Madrid… (Xiddig ka tirsan Los Blancos oo garoommada ka maqnaan doona inta ka dhimman xilli ciyaareedkan) – Gool FM
Dhaawac kale iyo Real Madrid… (Xiddig ka tirsan Los Blancos oo garoommada ka maqnaan doona inta ka dhimman xilli ciyaareedkan)
(Madrid) 29 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa wajaheysa dhibaato dhaawac oo hor leh, waxaana sii kordhaya xiddigaha garoommada ka maqnaanaya kulammada soo aaddan.
Xiddiga difaaca midig ka ciyaara ee Dani Carvajal ayaa dhaawac bowdada ah la xanuunsanaya, waxaana loo badinayaa inuu dhaawacan soo gaaray ciyaartii Champions League ee ay 1-1- barbarraha ah la galeen kooxda Chelsea kulankii lugta labaad ee wareegga nus-dhammaadka Champions League.
29-jirkan ayaa seegay tababarkii maanta ee kooxda Madrid, waxaana waaxda caafimaadka ee Los Blancos laga soo xiganayaa inuu xiddigan garoommada ka maqnaanayo inta ka dhimman xilli ciyaareedkan.
Real Madrid ayaa ciyaarta lugta labaad ee wareegga semi-fiinaalka Champions League booqan doonta Chelsea kulan ka dhacaya Stamford Bridge, waxaana Carvajal uu seegi doonaa ciyaartan kaddib dhaawacii soo gaaray.
Difaacan Isbaanishka ah ayaa wajahay dhaawacyo kala duwan xilli ciyaareedkan, waxaana uu kooxdiisa u ciyaaray kaliya 15 kulan dhammaan tartammada.
"Aamus" - Marco Verratti oo canaantay Pep Guadriola intii ay socotay ciyaartii xalay
Xabi Alonso oo doortay shaxdiisa shanta xiddig... (Zidane & Ronaldo oo hoggaaminaya)